Wariye ka tirsan SBC International oo la xiray & maamulka oo codsadey in la siidaayo – SBC
Wariye ka tirsan SBC International oo la xiray & maamulka oo codsadey in la siidaayo
Wariye Cabdi-Jamaal Macalin Axmed oo ka mid ah wariyaasha SBC uga soo warama gobolada dalka ayaa saaka xabsi magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud loo taxaabay, sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareed oo madaxbanaan.
Wariye Cabdi-Jamaal ayaa la xaqiijiyey inay xireen maamulka Ahlu-Sunna Wal-Jameeca ee magaalda Dhuusamareeb iyadoon ilaa iyo hada aan la faahfaahin ujeeedada loo xiray wariyahan oo uu wehliyo wariye kale oo lagu magacaabo Bashiir Maxamed Salaad oo ka mid ah saxafiyiinta ka hawlgala magaalada Dhuusamareeb.
Maamulka sare ee hay’ada warbaahinta Soomaaliyeed ee SBC waxay ka dalbanayaan maamulka Ahlu –Sunna ee deegaankaasi in sida ugu dhaqsiyaha badan wariye Cabdi-Jamaal loo siiyo xoriyadiisa isla markaana wixii dambi uu leeyahay loo maro hab waafaqsan qaanuunka iyo sharciyada ka jira deegaankaasi isla markaana uu helaa xeer dacwad qaadis iyo difaacis madaxbanaan, hadii aanu laheyn dambina si deg deg ah looga siiyo daayo xabsiga, iyadoo arintan ay ku keenayso sumcad xumo iyo ku tumasho xuquuqda saxaafada maamulka Ahlu-Sunna.
Maamulka SBC waxay codsanayaan in wariyaha la ilaaliyo naftiisa iyo qalabkiisa isla markaana laga fogaado wax kasta oo halis galin kara naftiisa, iyadoo sidoo kale ka dalbadey hay’adaha xuquuqul Insaanka iyo kuwa maxaliga ah ee deegaankaasi inay isha ku hayaan xaalada saxafiyiintan inta ay ku jiraan gacanta ciidamada maamulka Ahlu Sunna.
Lama oga ilaa iyo hada ujeedada saxafiyiintan xabsiga loo dhigay, hase yeeshee warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in loo cuskaday xarigooda baahinta wararka ku saabsan ka bixitaanka ciidamada Itoobiyaanka ay ka baxeen degmada Ceel Buur iyo deegaano kale oo ka mid ah gobolka Galguduud, arintaasi oo ah mid aan qarsooneyn oo dalka iyo dibada laga wada ogyahay.
Saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa tacadiyo kala duwan oo ay ka mid tahay dil, xarig, cagajugleyn waxay kala kulmayaan dhinacyada isku haya awooda maamulka Soomaaliya, iyadoo shirkii dhawaan ku soo dhamaaday dalka Turkiga uu si aad ugu sheegay dhinacyada siyaasada Soomaalida inay ilaaliyaan xuquuqda amniga saxafiyiinta Soomaaliya arintaasi oo loo arki karo inay bilow u noqon karto la xisaabtan kuwa ku raaxaysanaya ku xadgudubka saxafiyiinta daruufaha qalafsan ku shaqeynaya.